Ogaden News Agency (ONA) – Dibad-Baxyo Ka Socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Dibad-Baxyo Ka Socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Posted by Dayr	/ December 28, 2018
Ciidanka Amniga ee Bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sunta dadka ka ilimeeysiisa ku kala eryay dad dibadbaxyo dhigayay oo kasoo horjeeday go’aanka guddiga doorashooyinka ay dib ugu dhigeen doorashadii ka dhici laheyd deegannada qaar.
Weriyeyaal kusugan Congo ayaa sheegaya in dadka bannaanbaxayay ay booliska kala eryeen, waxaa lagu wadaa in Axadda nagusoo aadan ay doorashada Jamuuriyadda Dimuqraadiga Congo la qabto inkasta oo saddex magaalo aysan ka dhici doonin wax doorasho ah ilaa bisha Marso.
Mas’uuliyiinta guddiga doorashada waxay sheegeen in sababta ay dib ugu dhigeen doorashada ay tahay ammni darro magaaloyinkaasi ka jiro iyo cudurka Ebola oo halkaasi ka dilaacay.
Hoggaamiyaha mucaaradka Martin Fayulu wuxuu sheegay in tallaabo kasta oo dib loogu dhigayo doorashada ay tahay isku day la doonayo in lagu shubto ama inay wax isdaba marin dhacaan. Madaxweyne Joseph Kabila ayaa lagu wadey in labo sanno ka hor uu xilka ka dego halka qabashada doorashooyinka uu marar badan dib u dhac ku yimid.